Warqada caag ah iyo xero biraha
caaryada duro caag & caaryada tuuray
Shenzhen Gaofuheng Electric Technology Co., Ltd. waa One-joojin dunida oo dhan bixiyaha Service Warshadaha Electronic in nooca OEM & ODM daboolaya abuurta PCB, qayb iibsiga, shirka, barnaamijyo, imtixaanka shaqada, duray caaryada caag ah, baakadaha iyo logistics tan iyo sannadkii 2008.
Waxaan khibrad alaabta kala duwan oo ka mid ah qalabka guriga, macaamiisha qalabka korontada, ku haynta warshadaha, nidaamka digniinta dabka, qalabka jikada, qalabka caafimaadka, nidaamka audio baabuur, Kombuyuutarada iyo isgaarsiinta, iwm
Waxaan leenahay 8 khadadka shirka dhamaystiran, oo ay ku jiraan makiinado SMT ka xawaare dhexdhexaad xawaaraha sare ee Juki Brands, hoggaami-free mashiinada wavesoldering iyo mashiinada reflow, Alxan automatic printer, Jinka, kormeeraha X-ray iyo saldhigga Rework BGA, tijaabiyeyaal ICT, qalabka AOI, kartoo kulan imtixaanka FCT iyo sidoo kale shaybaarka baaritaanka cayn kasta oo xasilooni iyo imtixaanka isku halaynta our.
Waxaan aaminsan nahay in tayada iyo adeega, taas oo ah xubno muhiim ah inaan ku guuleysano suuqa. Waxaan mar walba ka go'an in la hagaajiyo tayada iyo adeegga dhex hagaajinta goobaha our iyo sidoo kale waayo-aragnimo macaamiisha iyo warcelin. Kooxdayada iibka sidoo kale waa cajiib leh xirfad khabiir ee isgaarsiinta iyo jawaab deg deg ah in aad baaritaan.
Waxaan jeclaan lahaa in aan si wadajir ah loo abuuro iskaashi guul-guul ah aad la. Fadlan nala soo xiriir maanta.